International Campaign for Freedom of Aung San Suu Kyi and Burma: Press Release: တနင်္သာရီဒေသရှိ ရွာသားများနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ရေရှည်တည်တံ့သော အနာဂတ်ကို ဖော်ဆောင်ရန် “အောက်မှအထက်” ကျေးလက်မှ ဦးဆောင်သောဖွံ့ဖြိုးရေးပုံစံကို တင်ပြခြင်း
Press Release: တနင်္သာရီဒေသရှိ ရွာသားများနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ရေရှည်တည်တံ့သော အနာဂတ်ကို ဖော်ဆောင်ရန် “အောက်မှအထက်” ကျေးလက်မှ ဦးဆောင်သောဖွံ့ဖြိုးရေးပုံစံကို တင်ပြခြင်း
၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လ ၂၄ ရက်
တနင်္သာရီဒေသရှိ ရွာသားများနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ရေရှည်တည်တံ့သော အနာဂတ်ကို ဖော်ဆောင်ရန် "အောက်မှအထက်" ကျေးလက်မှ ဦးဆောင်သောဖွံ့ဖြိုးရေးပုံစံကို တင်ပြခြင်း
ယနေ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့ ရန်ကုန်မြို့တွင် ထုတ်ပြန်သည့် တနင်္သာရီမြစ်မကြီးနှင့် ဌာနေတိုင်းရင်းသားကွန်ရက် (TRIP-NET) ၏အစီရင်ခံစာတွင် အထက်မှအောက်သို့ ချပေးသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးမူဝါဒနှင့် လုပ်ငန်းများ၏ ဆိုးကျိုးဒဏ်ကို ခံနေရသည့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသ ကြီးရှိ ကမိုသွေးမြစ်ဝှမ်းမှ ရပ်ရွာလူထုများသည် ဒေသခံတို့ဦးဆောင်သော ရေရှည်တည်တံ့နိုင်မည့် မိမိတို့ ကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကို အကောင်အထည်ဖော် ကျင့်သုံးနေကြခြင်းနှင့် ယင်းလုပ်ငန်းသည် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် မျိုးဆက်ပေါင်းများစွာ နေထိုင်လာခဲ့ကြသည့် ဌာနတိုင်းရင်းသားများအား အကျိုးဖြစ်ထွန်း စေသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
"ဒို့…ပိုင်ဆိုင်တဲ့ သဘာဝအရင်းအမြစ်ကို ဒို့…စီမံခန့်ခွဲစို့" ဟုအမည်ပေးထားသော အစီရင်ခံစာ၌ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဖွင့်ပေးခဲ့ပြီးနောက်၊ ဗဟိုအစိုးရနှင့် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးကြား အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အကျိုးခံစားမှုဖြစ်စေသော ဥပဒေ များပြဋ္ဌာန်း ခဲ့ပြီးနောက်တွင် တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်းရှိ နေရာဒေသအများအပြားတွင် အကြီးစား မြေသိမ်းမှု များပေါ်ပေါက်ခဲ့ရသည်။ သဘာဝအရင်းအမြစ်များ ထုတ်ယူရေးနှင့် စက်မှုကုန်ကြမ်းသီးနှံများကို လုပ်ခဲ့ သည့် စီးပွားရေးစီမံကိန်းများက ပျက်စီးမှုများကိုဖြစ်စေခဲ့သည်။ တချိန်တည်း၌ပင် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ များက မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းရှင်လူမှုရေးတာဝန် (CSR) အစီအစဥြ်ဖင့် နိုင်ငံတကာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့အစည်းများကလည်း ဗဟိုအစိုးရနှင့်တွဲ၍ ကြိုးဝိုင်းသစ်တောကွက်များ ဧရိယာကျယ်ကျယ် ထူထောင် ထားရှိနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းနေကြသည်။ သို့သော် ယင်းလုပ်ရပ်သည် မရည်ရွယ်ဘဲနှင့် မြေသိမ်းမှုများနှင့် အတင်း အဓမ္မမောင်းထုတ်မှုများတို့ကိုလည်းကောင်း၊ သဘာဝသယံဇာတများ ထိန်းချုပ်ခွင့်နှင့် အသုံးပြုခွင့် ဆုံးရှုံးမှု ကိုလည်းကောင်း ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ဒေသခံရပ်ရွာလူထုများသည် ဤအစွမ်းထက်လှသော အင်အားစုနှစ်ခု ကြားတွင် ညပ်နေပြီး မိမိတို့၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုများနှင့် ဒေသန္တရပတ်ဝန်းကျင်တို့ကို လက်လှမ်းယူ သုံးစွဲခွင့် ဆုံးရှုံးကုန်ကြသည်။
"ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေမှာ အထက်ကနေ အောက်ကိုချပေးတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွေဟာ ဒေသခံရပ်ရွာလူထုတွေရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တွေကို ဖျက်ဆီးနေတာတင်မကဘဲနဲ့ 'ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး' လို့ အပေါ်ယံမှာတွေ့ရတဲ့ ကြိုးပမ်းချက်တွေရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုအသစ် တွေဟာ လည်း ဒေသန္တရပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်မှာ မှီခိုအားထားနေရတဲ့ အဲဒီပြည်သူတွေရဲ့ ခံနိုင်ရည်နှင့် အထောက် အကူတွေပါ ဖျက်ဆီးနေတယ်" ဟု TRIP-NET အဖွဲ့ တာဝန်ခံ စောဖရင်ကီအေဘရူးက ယနေ့အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ပွဲ၌ ပြောသွားသည်။
သို့သော်လည်း ဤဖိအားများကို ကြုံတွေ့နေရသော ကမိုသွေးမြစ်ဝှမ်းမှ ဒေသခံရပ်ရွာလူထုများ သည် အခြေခံလူထု၏ အစားထိုးလမ်းကြောင်းကို မိမိတို့ဖာသာ ဖော်ထုတ်လုပ်ဆောင်နေကြသည်။ ယင်းမှာ ဒေသန္တရပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဇီဝမျိုးစုံလင်ထွေပြားမှုကို ထိန်းသိမ်းလျက်၊ သဘာဝသယံဇာတများ အသုံးပြု ရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးကို ဒေသခံတို့၏လက်တွင်းထားကာ၊ ဌာနေတိုင်းရင်းသားယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းထား သည့် အများပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်သော အောက်ခြေမှအထက်သို့ ချဉ်းကပ်သည့် ပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒေသန္တရအဖွဲ့အစည်းကွန်ရက်များဖြစ်သော ကမိုသွေးဌာနေတိုင်းရင်းသားများနှင့် သဘာဝရောင် ခြည်အဖွဲ့ (RKIPN)၊ လူထုအခြေပြု ရေရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ (CSLD)၊ နှင့် တနင်္သာရီမြစ်မကြီးနှင့် ဌာနေတိုင်းရင်းသားကွန်ရက် (TRIP-NET) စသည်တို့၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ကမိုသွေးမှ ကျေးရွာ ၁၁ ရွာသည် ယခုထိအောင်မြင်ထမြောက်ခဲ့ပြီးသမျှထဲတွင် ကိုယ်စားပြုခွင့်နှင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက် ခွင့်များရခဲ့ကြသည်။ ယခုအစီရင်ခံစာတွင် ငါးထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများ၊ ရပ်ရွာလူထုဦးစီးသစ်တောထိန်း သိမ်းရေးနှင့် ဒေသန္တရရေပေးစနစ် အပါအဝင် အဆိုပါအောင်မြင်မှုများကို အသေးစိတ်တင်ပြထားပါသည်။
"အဲဒီစီမံကိန်းများတွေရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေက ဘာပြနေသလဲဆိုရင် ဒေသခံရပ်ရွာလူထုတွေမှာ ဒေသန္တရပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကောင်းကောင်းခေါင်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပြီးတော့ သူတို့ ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်တဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးကိစ္စတွေရဲ့ လိုအပ်မှုတွေအပေါ် အခြေခံပြီးတော့ စီမံကိန်းတွေကို ကောင်းကောင်းကြီး အကောင်အထည်ဖော်နိုင်တယ်" ဟု RKIPN အဖွဲ့ ဥက္ကဌ စောခို ကဆိုသည်။
ကမိုသွေးမှ ရွာသူရွာသားများနှင့် ဒေသန္တရကွန်ရက်များတို့သည် သဘာဝနှင့် ဌာနေတိုင်းရင်းသား တို့၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုများကို အတူတကွထိန်းသိမ်းပေးသည့် အစားထိုးပုံစံတစ်ခု ဖော်ဆောင် နိုင်မည့် အုတ်မြစ်တစ်ခုကို ချပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ယင်းပုံစံတွင် ဒေသခံပြည်သူများသည် မိမိတို့၏မြေနှင့် သယံဇာတများကို အမှန်တကယ်ပိုင်ဆိုင်သူများ၊ စီမံခန့်ခွဲသူများဖြစ်ကြသည်။ ရှေ့ဆက်၍ ယင်းကွန်ရက် များအနေဖြင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင် အလုပ်လုပ်နေကြသော အဓိကကျသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူ များ၊ ပညာရှင်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသမားများနှင့် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအား ကမိုသွေး ရပ်ရွာ အသိုင်းအဝိုင်းထံမှ လေ့လာရန်နှင့် တရားမျှတ၍ ရေရှည်တည်တံ့နိုင်မည့် အနာဂတ်ဆီသို့ တန်းတူရည်တူ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအဖြစ် အတူတကွလုပ်ကိုင်ချီတက်ရေးအတွက် ဖိတ်ခေါ်ပြီး ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ရန် မည်သို့ရည်ရွယ်ပုံကို အစီရင်ခံစာ၌ ဖော်ပြထားသည်။
အယ်ဒီတာများအတွက် မှတ်ချက် -
ဤအစီရင်ခံစာကို မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့ရှိ မီကာဆာဟိုတယ်၌ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
နောက်ထပ်သိရှိလိုပါကလည်းကောင်း၊ မီဒီယာအင်တာဗျူးများအတွက်လည်းကောင်း ဆက်သွယ်ရန်မှာ -
စောဖရင်ကီ + ၉၅ (၀) ၀၉၇၈၃၆၀၉၁၈၁၊ franktheera@gmail.com (မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ)
စောခို + ၉၅ (၀) ၀၉၂၅၂၆၄၂၃၂၅ (ကရင်၊ မြန်မာဘာသာ)
စောကဲဒို + ၉၅ (၀) ၀၉၄၉၃၃၇၄၉၂ (ကရင်၊ မြန်မာဘာသာ)
ဂျယ်ရက်ဒ် + ၉၅ (၀) ၀၆၂၂၇၃၀၇၅၄၊ jwnaimark@gmail.com (အင်္ဂလိပ်ဘာသာ)
The report, "We will Manage Our Own Resources," presents how since the opening of the country to investment, the signing of the ceasefire between the central Government and the Karen National Union, and the passing of business-friendly legislation has made many areas of Tanintharyi Region vulnerable to large-scale land grabbing for destructive development projects such as resource extraction, and mono-plantations. Yet at the same time, international conservation organizations- enlisted by foreign investors as part of their Corporate Social Responsibility programs- are working with the central government to try and establish large swathes of protected forests. Inadvertently, it has caused loss of control and use of natural resources, including land grab and forced evictions. Local communities have been caught between these two powerful forces, losing access to their livelihoods and local environments.
"Top-down development projects in conflict-affected areas are not only destroying the livelihoods and environment of the local communities, but new threats from ostensibly "conservation" efforts are also undermining the resilience and agency of the very people who rely on the local environment," Frankie Abreu Coordinator of TRIP-NET said at the launch today.
"What the achievement of these projects has shown, is that the local communities can both very capably take the lead on conservation of the local environment as well as implement projects based on the needs and contexts of the development priorities that they themselves decide," said Saw Kho, Chairman of RKIPN.
The villagers in Kamoethway and local networks have laid the foundation to pursue an alternative model that conserves nature and indigenous peoples' livelihoods together, and where local people are the true owners and managers of their land and resources. Moving forward, the report states how these networks aim to engage key decision-makers, academics, conservationists, and activists working in Tanintharyi Region, inviting them to learn from the Kamoethway community and work together as equal partners towardsajust and sustainable future.
Download the report in Egnlish here.